🥇 ▷ New Honor Play 3e, tikidhada cusub ee tikidhada jaban wax ka yar 100 euro ✅
New Honor Play 3e, tikidhada cusub ee tikidhada jaban wax ka yar 100 euro
Sharafta Ciyaar 3e
Sharaftu waxay u taagan tahay Taleefannada gacanta oo tayo leh qiimo hooseeya waxayna hadda bilaabeen Mobilo cusub, Honor Play 3e oo doonaya inuu noqdo wax rakhiis ah, aasaasi ah oo ku habboon da’yarta Waxay rabaan mobilkoodii ugu horreeyay. Taleefoon loogu talo galay kala-soocidda oo aad u dhexdhexaad ah laakiin taasi waxay ikhtiyaar u tahay kuwa aan u baahnayn taleefanka galmada sare. Intaas waxaa sii dheer, qiimaheeda ayaa la filayaa inuu ka hooseeyo 100 euro.
Ciyaarta sharafta leh 3e Waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha laba nooc oo xasuusta ah mana garanayno, hadda, inay gaadhsiinayso dalal kale. Waxay la timid qiimo bilaabi lahaa, isweydaarsiga, qiyaastii 90 euro iyo seddex midab oo kaladuwan oo la heli karo: madow, dahab iyo buluug.
Sidaan nidhaahno, uMa jiro taleefan dhexdhexaad ah oo qurux badan. Laakiin adigoon dhiibin taxaddar, naqshad qurxoon, oo leh shaashad aan xadidneyn iyo fiiro yar oo qaabka biyaha daadinta ah dusheeda. Waxay leedahay shaashad ah 5.71 inji oo leh xallinta 151 x 720 pixels.
Gudaha, waxay la shaqeysaa processor-ka Helio P22 oo ay weheliso laba ikhtiyaar oo ah 2 ama 3 GB RAM taasoo kuxiran moodeelka. Waxa kale oo jira laba ikhtiyaar oo ah xusuusta gudaha oo leh 32 GB ama 64 GB kaydinta oo labadaba lagu fidin karo microSD ilaa 512 GB wadar ahaan kuwa doonaya meel dheeri ah. Hadana waa ay ka badnaan lahayd maalinba maalinta ka dambaysa. Marka laga hadlayo batteriga, waxay noqon doontaa 3,020 mAh iyada oo la adeegsanayo deked microUSB ah oo lagu dallaco.
Ciyaarta sharafta leh 3e waxay leedahay hal dareeraha kamaradda dhabarka oo ay weheliyaan toosh isku mid ah. Kani waa kamarad 13 megapixel leh oo leh f / 1.8 aperture ah oo lagu dhammeystirayo 5 megapixel sensor oo leh f / 2.2 aperture sawirro iskiis ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay Dual SIM (seddexjib koronto: laba SIM iyo hal microSD), jaakada 3.5 mm ee mashiinka dhagaha iyo Android 9 Pie oo ah nidaamka hawlgalka bilaabista.
Telefoonka, sida aan dhahnay, wuxuu ku sii jeeday dalka Shiinahalagu heli doonaa waana lagu heli karaa gudaha midab madow, dahab iyo buluug ah iyo laba nooc oo kala duwan (2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo kayd ah / 3 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo kayd ah) Hadda garan mayno bal inuu Spain imaan doono laakiin waxaan sugi doonnaa inaan kuu sheegno wararka oo dhan.